မတ်သာင်: November 2007
ပဿတာတၝဲပႜန်ဂတး သွံခိုဟ် ပႛဲဟာတ်ယဲာ
မတ်သာင်။ ။ ဟာတ်ယဲာ November 22,
ရန်တၞံကုဪတၝဲမန်ပႜန်ဂတးပေင်(၆၀)၀ါတဲု ပႛဲဂိတုဂျူလာင် (၁ရ)ဂှ် ဒက်ပတန်လ၀်ကမ္မတှမကေႜာန်ဗဒ်ှတၝဲပႜန်ဂတးမန်ပေင်(၆၀)၀ါမွဲ အတိုင်ဗွဲသၞ၀်ဝွံရ။
၁။ နဲာဟံင်ကောန် (ဥက္ကဋ္ဌ)
၈။ နဲာမတ်ဒိပ် လေ၀်ကော် နဲာမတ်သာင် လေ၀်ဂး
ပေႝာဝ်ကုဪညးစ်ှမွဲတႜဂှ် နဲာမတ်ဒိပ်ကုဪနဲာရတ်ရတ်္ဘါတႜဂှ် ဒ်ှကမ္မတှပဿတာတဲု ဗီုဂှ် ကေတ်ပႛဲ IMNA၊ အ္စာဒှဇြာင်ဂှ် အလင်္ကာမန်၊ သြန်ဂှ် နဲာပၞိက်ဆာန် ဖဲုဏာဖဲုနင် ဂွံအာပဿတာမွဲတႝး ပႛဲအမေရိကာန်လေ၀် သွံခိုဟ်၊ ပႛဲဍုင်္ဘင်ကံက်လေ၀် သွံခိုဟ်၊ ပႛဲဟာတ်ယဲာလေ၀် သွံခိုဟ် တက်လ၀်လၝီအိုတ်အာ လၞုဟ် မိသာယာဂေါဝ် (္ဘင်ကံက်) သဒးကလေင်တက်တၞိ (၈၀၀)ပႜန်ရောင်ဂှ် မတ်သာင် ဂွံပရိုင်ရ။ ပႛဲပဿတာဂှ် ဒၞာနူရုပ်ကႛိုပ်သ္ကိုပ်မဒ်ှလျုင်မှာဇန်ဂမႜိုင် နွံမံင်တဲု ပဿတာဂှ် သွံဂြိပ်ကွေံကွေံရောင် နဲာအံင်ထ၀် နူဟာတ်ယဲာဂးတိုန်ရ။ ကာလတက်ဂှ် ပဿတာမွဲတႝးမ္ဂး ဒးကုဪ (၂၅)္ဘါတ်တဲု ဂကောံကာပညာ ညးမနွံပၞိက်ကုဪတြးပဿတာတံဂှ် မွဲတႝးမ္ဂး (၃၀)ထကေ၀် သဒးသွံတဲု (၅၀%) သဒးပႜုပ်ကုဪဂကောံရောင် ကမ္မတှဖျေံလ၀်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ယ၀်သစိုတ်လုပ်စမိက်သဂွံတြးပဿတာကီုမ္ဂး ကေတ်အဆက်ကုဪမဂႝန် 083 2965626 ညိ။ ယ၀်သကြပ်ညန်မံင်ကုဪတိဍ်ာပယျုဪမ္ဂး ကေတ်အဆက်ကုဪနဲာအံင်မၝုဪ ရုင်ဆက်ဆောံဗော်ဍုင်မန်တၞိပႛဲဝင်ကမာန်ရ။
Posted by မတ်သာင် at 12:15 AM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Rangoon, ဒဂုင်၊လ္ဂုင်
So far as is known, of all the names by which Rangoon was called, Asitanjana (အသိတဉ္စန) is the most ancient. It isaclassical name, the literal meaning of which is "atown of collyrium or black colour". In those remote times Asitanjana was on the sea shore with its black colored ground covered with deep forest. Hence this name. In the Shwedagon Mediaeval Mon Inscription which was set up by Queen Shinsawbu and Dhammaceti in the 15th century, it is referred to as " the name ofatown in Rammannadesa (ရာမညဒေသ), known during the lifetime of Lord Buddha."
Dr. Forchhammer,aGerman archaeologist, who served for some time as Superintendent, Archaeological Department, Burma, about three decades agao, writes in regard to the existence of Asitanjana as follows:_
"The Mahavagga and its commentary statre that the two merchants, Taphussa and Bhallika, came from Ukkala, and in the commentary to the Angutttaranikaya Buddhaghosa names the city from which they came and where they erected the pagoda after their return, namely, Asitanjana, which was the name of an ancient twon on the hills north-west of the Shwedagon pagoda in Ukkadesa (ဥက္ကလဒေသ), the later Hamsavati (ဟံသာဝတှ). There can be no doubt that Budddhaghosa (ဗုဒ္ဓဃောသ) refers in the cited passages to Further India and not to Orissa (သြရိဿ), and in the face of the unanimous statements of the native histories, the details of the Shwedagon inscriiptions, the evideences adduced from the Budddhist canon, the commentaries writen in India, and the total absence of reval claims or representations to the contrary, no rsasonable objections can be raised in connection the foundation of the Shwedagon Pagoda with Taphusssa (တဖုဿ) and Bhallika (ဘလ္လိက) and to receive the existence of Asitanjananagara (အသိတဉ္စနနဂရ) in Ukkaladesa (ဥက္ကလဒေသ) in the 5th or 6th century before christ as an accredited fact in the early history of Burma."
ှုIt is stated in the Mon version of the History of Shwedagon Pagoda, the Slapat Wan Dhat Kyak Lagun (လ္ဂုင်) that Mount Singuttara (သိင်္ဂုတ္တရ) (Mount Horn ) on which the Shwedagon Pagoda is situated had six other classical names, to wit, Trihakumbha (တြိဟကုမ္ဘ), Sattabhummi (သတ္တဘူမိ) , Dhannavati (ဓည၀တှ), Pokkaravati (ပေါက္ခရ၀တှ), Bhuridatta (ဘူရိဒတ္တ) and Siharaja had three hill-tops looking like water-pots. It was called Sattabhummi (သတ္တဘူမိ) because it had seven kinds of earth: golden, silvery, red, white, black, sour and bitter. It was called Dhannavati (ဓည၀တှ) because it had abundance of grains and food. It was called Pokkharavati (ပေါက္ခရ၀တှ) because 99 hillocks surrounded this Mount, by way of paying homage as if 99 lotuss opened out their blossoms altogether in homage to the sun. It was called Bhuridatta (ဘူရိဒတ္တ) because it was the gift of an auspicious land. And it was called Siharaja (သှဟရာဇ) because fromadistance it looked graceful and majestic like the lion.
The Sanskrit word, Trikumbha, is changed into Pali Tikumbha (တိကုမ္ဘ) after dropping 'r' and 'h'. Then again Tikumbha cecomes "Tikum" (တိကုံ) "bha" being dropped. Again "Tikum" is corrupted into "Dagum" (ဒဂုံ) when "ti" and "k" are changed into 'da) and 'g' respectively. Hence he pagoda as well as the town has come to be called "Dagum".
Mention of this town as Dagum is frequently made in U Kala's History of Burma, the Glass Palace Chronicle and poems by Nawade, natshinnaung, Letwethondara, Seindakyawthu, etc. But in some Mon historical records, the name of the town is referred to as Lagan (လဂင်) andastory is attaced to it. It is said that there existedavery gig wood0oil tree, Dipterocarpus laevis (ကညင်ပင်) in that place. Whenabranch of the tree was cut down, it did not fall down to the ground but lay across the other branches of the tree. hence the place was called Lagan ( lagan in Mon means " to lie across"). The story went on to say that "Lagan" was changed into lagum (လဂုင်) later. I am inclined to thinmk that this story is an invented one by which the writer attempted to explain the meaning of the name "Lagun". it seems clear that Lagun is derived from "Dagum" rather than from "lagam". There are certain instances in Burmese where "D" is changed into "L".
In 1752, U Aung Zeya who later became king as Aluangpaya, rose against Banna Tala (ဗညားတလ) the Mon King, who ruled not only over Lower Burma but also over Upper Burma. Mon forces were defeated and twon after town fell into his hands. In 1755, he foughtagreat battle at Dagum, and captured the twon. he knew that his victory over Banna Tala at Dagum was decisive and so he held that the capture of this twon was in effect the end of the war. So he gave the new name of "Ran-kun" (ရန်ကုန်) to the town. As Ran (ရန်) means strife and Kun(ကုန်) the end, the name is meant to commemortate the end of the war.
Regarding the name "Rangoon", I know you may haveadifferent version. Feedback is welcome.
Posted by မတ်သာင် at 3:45 PM No comments:
Here in the States, tomorrow is Thanksgiving Day. It isagazetted holiday to celebrate on the fourth day of November, the end of the harvest season. Though it was originallyareligious observance, it is now celebrated across America by the colorful Americans including Mon Buddhists. I was asked by some American friends if I enjoy eating Turkey-dinner on this occasion. I said No. However, we will take an advantage of the holiday managingaMon Debate at the Mon Buddhist Temple, Ft. Wayne, IN. That was why I was IMed last night about how to debate in Mon by Lulu Mommom who won the first prize debate of Hoosier High school last week. Wow..she speaks Burmese and English fluently instead of Mon. I hope she will do well tomorrow and stand first at the Mon Debate too. Hope you the best, lulumommom.
And the following is an email sent from Africa. Hi Ashley and Ryan, I miss you too. Hope to see you next year. Wish me to be here until you are back home. I love your state, Tennessee, derived from Tanasi which pronunciation is close to Mon pronunciation of Tenasserim, Tanansi. OK...friends, brothers and sisters, wish all of you the best of the best on the earth.....!
Hey...in place of Ashley's picture, see her email sent to me. Well....here you go!
hello brother ravi!
ryan and i send our thanksgiving wishes and love to you! how will you spend your first thanksgiving in america? what are you giving thanks for? i hope you eat some turkey and dressing!!! do you still observe the traditional fast of monks where you do not eat after noon?
liz tells me you are trying to get ............! is she helping you with this process??? i do pray it works out for you. have you had any contact with your father in mon state?
i hope you getachance to visit brother bill and ranger mike some time!!! i know they would love to see you. ryan and i hope to be home next summer foravisit. we will makeaplan to see you if you are still in america!
Posted by မတ်သာင် at 2:17 PM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma)
The Place-names in Monland can be grouped in two classes. Mon literature refers to these two classes of place-names by Pali terms, Anwatthasanna (အနွတ္ထသညာ) and Rulhisanna (ရုဠှသညာ). Anwatthasanna means "following its owner", and Rulhisanna means "aimless". Thus if the name " Lotus Lake", is given toaplace where there isalake with lotus flowers, it will Anwatthasanna, but if the name "Lotus Lake" is given toavillage situated inadesert of sand, it will be "meaningless" and therefore Rulhisanna.
Many place-names in Monland are descriptive and have close associations with local geography or history. Thus the place name " Toungoo" means " the spur ofahill", and such names as " Tantabin" (the lone palm tree), " Nyaungbintha" (the pleasant banyan tree), "Taungtha" (pleasant hill) are descriptive of the local "geography", andaplace name like "Yan-gon" (the end of strife) is descriptive of an incident in local history, namely the end ofawar.
The Mon and Burmese as the people prefer all names to be descriptive, whether they are names of places or names of persons. for example, the name of the President of this Research Society means "conspicuous success", and my own name, "a man of peace". It is, therefore, not surprising that the Mon and Burmese always attempt to find the meaning behind each place name. In the case of Burmese place names, the meaning and the purport of each name are generally guessed, but in the case of Mon places names which have become Burmanised in course of time, wrong conjectures usually result.
These facts will be illustrated by my following study of some place names in Lower Burma. (To be continued)
by Professor E Maung, M.A.
Posted by မတ်သာင် at 1:47 PM No comments:
ဆတ်လွဟ်ပႛဲဂႝိင်တဲု အလုဪသှပႝာန် အာမံင်ကျာ်တိုန်မံင်ဘာ လံလမံင်ရ။္ဘိုန်ဂ်ှလေ၀် ဍေံပန်သင်တံရောင်ဂှ် ညးဂ်ှမွဲ ထေင်လ၀်ကီုရော။ လၞုဟ်…သင်လေ၀်ဟွံရဲု ခရ်ှလေ၀်ဟွံပဲါ ဂႜဲာမံင်သႝ ပမံင်ဂဗုတ် လုတ်မှာဖံက်ပႜန် ပန်ဗာ်္ဘုင်တက် ထ္ပက်ဓဇုဪအကြာသင် ဆင်စှေ်မံင်ကတိုင်နရက် ဒ္ဂေတ်ဗက်ကွေတ်ဒေ၀ဒတ် ဂွံညာတ်ကေတ်နမတ်တဲုအိုတ်ရသေင်ဟာ။
ပႛဲသႝာံခရေတ် ၁၉၉၀ တေံ ဓဗုင်ဓဗင်တိတ်ကႜုင် ဒုင်ပေဲါရဲုစ်ှမဲာတဲု ဍေံတံဟွံသ္ပစၞတ်သမ္တီ်၊ ဍေံတံထိင်လ၀်အာဏာ ၂၀ သႝာံတဲု ကေင်ကာအုပ်ဓုပ်ဍေံတံ ဗိုန်ခိုင် ဗီုဆိင်လ၀်ဍေံတံက္လိဂွံတဲုမှ ဍေံသေႜာတ်ကယျိုင်ပႝာန်တဲု သ္ပသၞိင်မွဲအာယုက်ရောင်ဂး။ ဂလာန်အပြောံ ဇျောံဟီုကေတ်သၞး တမ်ဟွံမွဲကေႝာတ်ဟွံမွဲ ညးဂ်ှမွဲ သဂွံပတှေ်ညိရော။ အိုယ်…ကာလတေၞာ်ရံင် လၞုဟ်…တန်ဒ်ှဂႜာံလုပ် ၂၀ သႝာံရသွံ။
ပႛဲသႝာံခရေတ် ၁၉၉၉ တေံ ဓဗုင်ဓဗင်တိတ်ကႜုင်မွဲဗီုပႜန်။ အာဂတနူဏံ ပတံနူ ၂၀၁၀ သႝာံ စုဪုကုဪစိုပ် ၂၀၄၀ သႝာံ ပွိုင် ၃၀ သႝာံဂှ် ဗၞာသဒးဒ်ှမွဲရောင်၊ ကောန်ဍုင်အရင်ဂမႜိုင် သဒးံကႜက်အိုတ်အာရောင်၊ အနုဘၜဍုင်ဗၞာ သဒးဗျာပ်တြးအာဍုင်ဝုတ်ဒိုဟ်ဂမႜိုင်ရောင် သ်ာဝွံ အလုဪသှပႝာန်တံ ဖျေံဖျောန်လ၀်ရ။ ဂလာန်ဓဗုင်ဓဗင်ဝွံ အရေ၀်ဆဆုဪ အရေ၀်ဟွံမွဲကုဪကြက် အရေ၀်ဇြဲကၜ္ဘၜသတ်ရောင် ဟီုဂွံဟာ။ အရေ၀်ကႜာတေံ္ဘါခန် ဍာံကႜုင်တဲု အရေ၀်ဝွံလေ၀် သဒးဍာံဟေင် ဖျေင်လ၀်စိုတ်ဒတဲုဟွံဂွံ။ အဃောခႛာ်အာ သတ်တာပြဟ် ကေင်ဒ်ှလ၀်မွဲဂႜံင်တဲု ခယျဍေံဍံင်ဗက်မံင်ဇကုတွုဪ လကိုတ်တၝုဪမံင်လၞိုန်ဂ်ှလေ၀် ဍေံဟွံသပ္ပါယ်။
ရံင်လွဲုလွာ်အလုဪသှပႝာန်တ္ဘဲုိုတ်ညာဏ်မနွံ ချပ်ဗစာရဏာအိုတ်ညိ။ ပေဲါတက်ကျာကႛိုပ်ဖၜ ယ၀်သဟွံဒှ်၊ အလုဪသှပႝာန် ယ၀်သဟွံစှေ်၊ ရဲရပ်လွဟ် ယ၀်သဟွံမွဲ ဘ၀ကောန်ဂကူမန်တံ သ်ာလုဪအာစိုပ်မာန်ရော။ ပွိုင် ၃၀ သႝာံဓ၀် ဂကူမန် ကေႜံအာမာန်ဟာ။ လဖျေံလဖျောန် ၃၀ သႝာံကုဪ သ္ဇိုင်သေႝာဝ်ဥပဒေဍေံတံ ချူဓဇက်လ၀်ဂှ် ဗီုလုဪဆေင်စပ်မံင်ကီုရော။ သၞာန်ဝွံ ညးလုဪမွဲ ဒုင်လျိုင်ဟီုသ်ှကုဪမာန်ရော။
Posted by မတ်သာင် at 11:23 PM 1 comment:
Statement on the recent and ongoing peaceful protest against the Burmese military regime
We, Mon Sangha Organization of America (MSOA), strongly believe that the current situation in Burma is needed international attention in order to protect and support the peaceful determined demonstrations on the hiked prices on August 15, 2007.
We believe that those protesters are just addressing their grievances to the military regime for rising commodity prices, illegal detention, mistreatment of detainees, and discriminatory policy of the State Peace and Development Council (SPDC). But the SPDC responded to the peaceful demonstrations by arresting more than 100 of peace demonstrators. Thirteen of them are said to be sentenced at least 20 years in imprison for expressing their own opinions and beliefs.
We are also so regret to know that SPDC has failed to exercise sacred respect towards Buddhist monks who have shared their sympathy with the people being suffered from hi-rocketing fuel prices. Duringapeaceful demonstration in Pakhoku, the pro-SPDC’s members of the Union Solidarity and Development Association (USDA) tiedapeaceful Buddhist monk demonstrator to an electric pole, beat him withagun butt and released him without an apology. It is evident that SPDC has never trained its supporters to adoptapeaceful way to solve problems.
In the history of Burma, Buddhist Order has playedavery important role in advising kings to be good rulers. The Sangharaja, (the Head of the Order) was automatically appointed as the adviser of the King. If he was informed or realized that the King, the head of the state, misruled and was unjust, he gave advice to the King. If the King refused to take his advice, he performed boycott against the King. This was called Pattanikujjana in Pali. For example, in the reign of King Narasu of Pagan Dynasty (AD 1160-1165?), King Narasu attempted to kill his father. But Pansakula Mahathera, the then Sangharaja, advised the king not to do so. When the king refused to take his advice, he boycotted the king by leaving Burma to Sri Lanka.
Therefore, we, the members of MSOA, urge:
The State Sanghamahanayaka Committee to boycott the SPDC by refusing to offer religions service to SPDC and support to the army servicemen, the Sangha and the people of Burma for the benefit of civilians.
The State Peace and Development Council to respect the people’s desire in 1990 election and to keep their promise to return their barracks.
United Nation Security Council to immediately discus issues on Burma and pressure the SPDC to initiate tripartite dialogue in order to findagenuine political solution in Burma.
Mon Sangha Organization of America
Tel (330) 957-2896
Posted by မတ်သာင် at 4:19 PM No comments:
အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်နေ့တွင် ဂျော့ဂ်ျတက္ကသိုလ်မှ မစ္စတာစမစ်ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အမေရိကရောက်မွန်တို့၏ အခြေအနေကို လေ့လာရန် အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဖေါ့တ်ဝိန်းမြို့၊ မွန်ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းသို့ ရောက်လာကြရာ မွန်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(ဖေါ့တ်ဝိန်း)ဥက္ကဋ္ဌနိုင်သက်လွင်က လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် မစ္စတာစမစ်က မေးချင်ရာမေးဟု မေးခွင့်ပြုသဖြင့် စာရေးသူက မွန်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကျရှုံးပြီးနောက် (၁၉)နှစ်အကြာတွင် အမေရိကာန်ပြည်ထောင်စု မွေးဖွားခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ယခုအခါ၌ တတိယကမ္ဘာတွင် အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်အောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို မည်သည့်အရာက ဆောင်ကျဉ်းပေးသည်ကို ပညာယူအတုခိုးလိုကြောင်း မေးမြန်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာစမစ်နှင့်အဖွဲ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကောင်းမွန်မျှတသောတရားဥပဒေ၊ မတူကွဲပြားမှုကို လက်ခံနိုင်သော ပြည်သူများ၊ တည်မြဲသောအစိုးရနှင့် ဩဇာရှိသောဘုရားကျောင်းတို့က အမှားအယွင်းမရှိအောင် ကွပ်ကဲဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကြောင့်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။ မွန်ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (ဖေါ့တ်ဝိန်း) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးနိုင်မိုက်ကယ်မွန်က သင့်တင့်မျှတသော အဖြေဖြစ်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ စာရေးသူကား ပြီးပြည့်စုံသောအဖြေဟုသာ ပြောချင်သည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်ပြီး မျှတသောတရားဥပဒေ ရှိရန် လိုအပ်သည်။ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ အားကောင်းပြီး သာမန်ပြည်သူများအနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းတန်ဖိုးကို နားလည်အသိအမှတ်ပြုရသည်။ အာဏာစက်ရှိသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဓမ္မစက်ရှိသောဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကလည်း များစွာ လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးပြီး အဖြေတွင် မပါဝင်သော အချက်တစ်ခုကား တရားရေးကို တည့်မတ်ပေးသော တရားသူကြီးချုပ်၏အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း(၂၅၀)ကျော်သမိုင်းကို သမင်လည်ပြန်ကြည့်သော် မွန်အမျိုးသားတို့သမိုင်းကြောင်းသည် အကောင်းဘက်၌ မရှိ။ ဗမာနှင့်ထိုင်းတို့၏ စနစ်တကျ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးဥပဒေ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ အနှိပ်ကွပ်ခံရမှု၊ အမြင်ချင်းမတူပြည်သူများကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမှု၊ ဖောက်ပြန်သောအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားသော ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ အလွဲသုံးစားပြုမှု၊ တရားသူကြီးများ၏ တရားလွန်ဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်မှုတို့ကြောင့် မွန်အမျိုးသားရေးဝါဒသည် မုန်တိုင်းကြားမှ မီးပွားပမာ၊ လှိုင်းဂယက်ကြားမှ ရေပွက်ပမာ ကျဆုံးလုနီးပါးအခြေသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ မွန်အချင်းချင်းမသင့်မြတ်မှု၊ ချောက်တွန်းမှု၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ အခွင့်အရေးယူမှုတို့ကြောင့်လည်း မွန်အမျိုးသားတို့တွင် ဘုံရန်သူကို အံတုနိုင်သော၊ ခိုင်မာတောင့်တင်းသော အင်အားစုတစ်ရပ် မပေါ်ခဲ့။
မွန်အမျိုးသားတို့၏သမိုင်းကို လေ့လာလျှင် အချင်းချင်းမသင့်မြတ်မှုအသွင်သဏ္ဌာန်ကို အစဉ်တွေ့ရသည်။ မွန်တို့သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အစဉ်အလာကြီးမားသူ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရာတွင် အထက်တန်းကျသူ၊ မွန်ဟုဆိုသည့်အတိုင်း စိတ်ထားမွန်မြတ်သူဟု နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ထိုကျော်ကြားမှုအားလုံးသည် (၁၁) ရာစုတွင် ခမာနှင့်ဗမာတို့၏လုယက်မှုကြောင့် ဒေ၀ါလီခံလိုက်ရသည်။ (၁၈)ရာစုတွင် ဗမာနှင့်ထိုင်းတို့၏ ပါးနပ်သော ခါးပိုက်နှိုက်ပညာကြောင့် ရှိသမျှ၊ စုသမျှ ပြာပုံဘ၀ ရောက်ရပြန်သည်။ မွန်တို့၏ လက်ရှိအခြေအနေသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်က အခြေအနေနှင့် လုံးဝခြားနားသွားပါပြီ။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်က စာရေးသူ၏ မွေးရပ်ဌာနေတွင် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန် မိမိ၏ အကြံပြုချက်ကို ရပ်ကွက်သံဃနာယကဥက္ကဋ္ဌက ပျက်ရယ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရ၏ ဖိအားကြောင့် မိမိကို ကန့်ကွက်ခဲ့သော ထိုဆရာတော်ကပင် ဦးဆောင်ပြီး ဤနှစ်တွင် ကိုယ်ထူးကိုယ်ထမူလတန်းကြိုကျောင်းကို စတင်တည်ဆောက်တော့မည်ဟု သိရသည်။ ကွာခြားသည်မှာ မိမိတည်ဆောက်ရန် ရည်မှန်းထားသော ကျောင်းမှာ မွန်စာကို အဓိကသင်ကြားမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုတည်ဆောက်မည့်ကျောင်းမှာ မွန်စာကို သင်ကြားခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေ။
ဤသည်မှာ မွန်တို့၏ သဘောသဘာဝတစ်ခုကို သတိထားမိသည်။ (၁၄)ရာစုတွင် ဗြတ္တဗသည် ဗညားဦးကို ပုန်ကန်ရန် မုတ္တမကို ချယ်လှယ်လိုသော စုခိုထိုင်းတို့၏ အကူအညီကို ရယူခဲ့ဖူးသည်။ မြောင်းမြစားသမိန်လောက်ဖြားသည် ဗညားနွဲ့ကို မရှိခိုးလို၊ အင်းဝဘုရင် မင်းကြီးစောစွာကဲကိုသာ ဦးတင်လိုသည်ဟု ဗဂိုးကို သိမ်းရန် မျက်စပစ်ခဲ့သည်။ သူ့စနက်ကြောင့် မွန်နှင့်မြန်မာ နှစ်ပေါင်း (၄၀)ကြာ စစ်ခင်းခဲ့ရသည်။
မွန်စစ်ဘုရင်ရာဇာဓိရာဇ်သည် အနာသည်းလာသောအခါ သူ့သားတွေကို စိတ်မချသဖြင့် သူမရှိတော့သည့်အချိန်တွင် ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိကြရန် မှာကြားခဲ့သည်။ သူ့မှာကြားချက်ကို မည်သည့်သားကမျှ အလေးထားသည်ကို မတွေ့ရ။ ဗညားဓမ္မရာဇာ လုပ်ကြံခံရသည်။ ဗညားရံ(ပ)က ဗမာတွေနှင့် ဆက်ပြီး စစ်မတိုက်လိုသဖြင့် နှမတော် ရှင်စောပုကို အကျယ်ချုပ်သဘောဖြင့် အင်းဝဘုရင်ကျော်စွာဆီမှာ ထားရသည်။ ၀ါရီရူမင်းဆက်သည် အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်လာကြရာ နောက်ဆုံး အင်းဝမှ ပြန်လွတ်လာသော ရှင်စောပုသာ ကျန်တော့သည်အထိ ဖြစ်သည်။ ရှင်စောပုသည် အသက်ငါးဆယ်ကျော်မှ မင်းဖြစ်သဖြင့် ဗညားထော(မင်းအို)ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဘာသာတရား၌ မွေ့လျှော်သူ ဖြစ်သဖြင့် ၀ိဟာရဒေ၀ီဟူ၍လည်းကောင်း၊ လောက(၃)ပါးကို လင်းဖြာစေသူ၊ မြင့်မြတ်သောဥပဒေဖြင့် သုံးလောကကို အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းသူ၊ မင်းတကာတို့ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်သူ၊ အတုမရှိဘုရင်မကြီးဟူ၍လည်းကောင်း ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ရှင်စောပုသည် မွန်မြန်မာကရင်ချင်းဝတို့၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကို ခံရပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာအထိ ရာမညတိုင်းငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
ရှင်စောပုကို ဆက်ခံသော ဓမ္မစေတီမင်းကြီးသည် မွန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ တောင်ငူနှင့်ပြည်ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီး ကျန်ဒေသများကို ကုသိမတိုင်း၊ ဟံသာဝတီတိုင်း နှင့် မုတ္တိမတိုင်းဟူ၍ သတ်မှတ်ကာ တစ်တိုင်းလျှင် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန (၃၂)ခုဖြင့် ရာမညတိုင်းကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကို တစ်ခုတည်းသောဥပဒေ၊ အလေးချိန်ဖြင့် အုပ်ချုပ်နိုင်အောင် ဓမ္မစေတီဖြတ်ထုံးကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ဤဥပဒေကို နောက်ပိုင်းတွင် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၊ လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း အာသံနှင့်မဏိပူရအထိ ကျင့်သုံးခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဓမ္မစေတီမင်းကြီးသည် ရာမညတိုင်းကို လေးစားအောင် အင်းဝ၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများကို သံတမန်နည်းအရ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သည်။
မွန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးသည် ဗမာ့အမျိုးသားရေးဝါဒီနန္ဒဘုရင်လက်ထက်တွင် လုံးဝနီးပါး ပျက်စီးရသည်။ ထိုင်းကို စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရန် စစ်သားစုဆောင်းရာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများကိုပါ လူထွက်စေသောအခါ မွန်နှင့်မြန်မာပဋိပက္ခကြီးထွားလာရသည်။ မွန်တို့သည် မိမိ၏အမျိုးသားရေးဝါဒကို ရှေ့တန်းတင်ရမည့်အစား ဗဂိုးတွင် ကြွင်းကျန်ရစ်သောဗမာနှင့်ရှမ်းတို့ကို စည်းရုံးရင်း မနိုင်ဝန်ထမ်းခဲ့ရသည်။ (၁၈)ရာစုတွင် ရွှေဘိုမှ အစွန်းရောက်ဗမာ့အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဦးအောင်ဇေယျက မွန်တို့ကို မျိုးဖြုတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲပြီး ဗဂိုးနယ်တွင် လူသတ်ပွဲကျင်းပသောအခါကျမှ မွန်တို့သည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် မက်ခဲ့သော အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာကြသည်။ သို့သော် နောက်ကျခဲ့ပါပြီ။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော် အင်အားမွေးခဲ့သောဗမာနှင့်ထိုင်းတို့၏ ကျားကွက်ထဲ၌သာ အစားခံရင်း လုံးပါးပါးခဲ့ရသည်။
Posted by မတ်သာင် at 12:47 PM No comments:
Some Place-names in Monland (Lower Burma): Rangoon...
Statement on the recent and ongoing peaceful prote...